May | 2016 | Wakhet Diary
Posted on May 20, 2016 by Wakhet Diary
मिश्रित खेतीबाट दोहोरो फाइदा
इलाम, मंसिर १२ (इपोस)–यतिबेला इलाममा सुन्तलाको सिजन शुरू भएको छ । सुन्तलासँगै अर्को नयाँ खेती किवी फल पनि पाक्ने सिजन यही हो । फलफूलबाट मनग्ये आन्दानी लिने धेरै किसानहरुले त्यही सुन्तला बारी र किवी बारीभित्र अलैंची लगाएर आम्दानीको अर्को स्रोत थप्दैछन् ।
जिल्लाका अलि उच्च भागमा किवी फस्टाउँदा त्यहीं अलैंची पनि राम्ररी फस्टाएको देख्न पाइन्छ भने अलि न्यायो भागमा लटरम्म सुन्तला फलेको बगानभित्र उसरी नै अलैंची फस्टाएको छ । ‘मकै लगाएको भए १० डोको पनि फल्ने थिएन । त्यति नै बारीमा १०÷१२ बोट किवी छ । त्यसभित्र अलैंची पनि उसरी नै फस्टायो यो साँच्चै अपत्यारिलो छ’–सुलुबुङ्गका किसान भोला खतिवडाले अलैंची देखाउँदै भने–‘तीन लाख रुपैयाँ जतिको किवी हुन्छ होला । अहिले बिक्री गरेको छैन । यो वर्षबाट अलैंची पनि फल्न थालेको छ ।’
किवीलाई आवश्यक मल र पानीको उचित प्रबन्ध मिलाउँदा त्यसैमा अलैंची पनि राम्रो हुँदै गएको खतिवडा बताउँछन् । ‘एक पटक यो सबै अलैंची बगान थियो । सबै मासियो अहिलेबाट पुनः अलैंची फस्टाएको छ’–उनले भने–‘नयाँ माटो र हेरचाह, मलजलको राम्रो प्रबन्ध गर्दा दोहोरो आम्दानी हुने रहेछ ।’ सुलुबुङ्गका यी किसानको जस्तै इलाम नगरपलिका–७ का जीवन सुवेदीले पनि सुन्तला बगानभित्र राम्ररी अलैंची फलाएका छन् । चार रोपनी जमिनमा सुन्तला र त्यसभित्र अलैंची लगाएका सुवेदीले गत वर्ष ५५ किलो अलैंची फलाएको बताए ।
‘मल, पानी, गाइको गहुँत सबै मिलाएर अलैंचीलाई लगाउँदा उत्पादन राम्रो हुने रहेछ’–सुवेदी भन्छन्–‘यो वर्ष ३ मनभन्दा बढी अलैंची उत्पादन हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । सुन्तलाबाट पनि उत्पादन राम्रो भएको छ ।’ यो वर्ष पनि २०÷२५ बोट अलैंचीको विरुवा थपेका सुवेदीले सुन्तलामा भने बोटै सुक्ने रोग देखापरेपछि समस्या परेको बताउँछन् ।
यता अलैंचीलाई भने यतिबेला गोडमेलको ठिक्क सिजन शुरु भएको जिर्मलेका किसान गोविन्द पौडेल बताउँछन् । नयाँ जात अर्थात सलकपुरे जातको अलैंचीमा यतिबेला फूल लाग्न कोथा बस्ने र अत्यधिक टुसा आउने भएकाले त्यसको छाँटकाँट मिलाउनु यो अलैंचीको नयाँ विशेषता नै भएको पौडेलको भनाइ छ । ‘किसानले पुनः अलैंची खेती शुरु गरेका छन् तर, कुन समयमा के गर्ने भन्ने मुख्य कुरा नजान्दा उत्पादन लिन सकेका छैनन्’–उनले भने–‘भदौमा फल टिपिसकेपछि मल लगाइन्छ र अहिले मंसिर–पुसमा कोथा र टुसा धेरै हुन्छ त्यसलाई दुई इञ्चको फरक पारेर काँटछाँट गर्दा मनग्य आम्दानी हुने रहेछ ।’ अलैंचीलाई राम्ररी स्याहार गर्न सक्दा एक रोपनीमा दुईदेखि अढाइ मन उत्पादन भएको पौडेलले बताए ।
जिर्मलेकै सलकपुरमा पनि २०४५ सालमा भित्र्याइएको नयाँ जात अर्थात सलकपुरे जातको अलैंची र सुन्तलाको दोहोरो खेती अधिकांश किसानले गरेका छन् । यो वर्ष त्यति सुन्तला नफले पनि यो वर्ष सलकपुरबाट एक हजार मन अलैंची उत्पादन भएको किसानको भनाइ छ । ४० जिल्लामा विस्तार भइसकेको यो अलैंचीबाट पछिल्लो समयमा उत्पादन राम्रो हुँदा किसानको आकर्षण पनि बढ्दो रहेको सलकपुरका अर्का किसान याम अधिकारी बताउँछन् । यो वर्ष अलैंचीको मूल्य पनि आशाजनक भएकाले अलैंचीप्रति किसान उत्साहित देखिएका हुन् । शुरुमा एक लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रतिमनसम्म पुगेको अलैंची भारतीया नाकामा भएको अवरोध र तराई आन्दोलनका कारण अहिले घटेर ८० देखि ८२ हजार रुपैयाँ प्रतिमन रहेको व्यापारी बताउँछन् ।
विश्वका अलैंची उत्पादक तीन मुलुकमध्ये नेपाल अग्रस्थानमा रहँदै आएको मानिन्छ भने नेपालको एक हजार सात सय ६० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा अलैंची खेती हुँदै आएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । फिक्कलमा रहेको अलैंची विकास केन्द्रले पनि यो वर्ष पाँच लाख विरुवा वितरण गरेको जनाएको छ ।
मसलाजन्य बालीका रुपमा रहेको अलैंची भारत निकासी हुन्छ भने समुद्रपारी पनि माग बढी रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राम्रो मूल्य दिने भएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानले अहिले खाद्यान्न र अन्य नगदेबाली अदुवा, आलु मासेर अलैंची लगाउन थालेका छन् । अलैंचीलाई थप मलजल गर्न नपर्ने गरी अलैंची र अन्य बालीको मिश्रित खेती समेत गरिरहेका छन् ।
मिश्रित बाली लगाउँदै किसान
इलाम, कातिक ३० (इपोस)–इलाम सुलुबुङका युवा कृषक गोपाल खतिवडाले चिया र अलैंची जस्ता बहुमूल्य नगदेबाली लगाएको बगानभित्र किवी फल फलाएर मिश्रित खेतीको अभियान चलाएका छन् ।
चिया, अलैंची मात्र नभएर किवीका बोटमुनि ग्राउण्ड एप्पल (भूईं स्याउ), पपिनो मेलन, पाउलोनिया, अनार र जापानीज सुन्तला समेत फलाएका छन् । सात किसिमको मिश्रित बालीबाट वर्षेनि मनग्ये आम्दानी लिन उनी सफल भएका छन् । मिश्रित खेतीमा एक बालीबाट अर्को बालीलाई पर्याप्त छहारी र चिस्यान उपलव्ध हुने उनी बताउँछन् । यसपालिको किवी फल विक्रीबाट मात्र करीब पाँच लाख आम्दानी हुने उनी बताउँछन् ।
करीब सात रोपनी जग्गामा लगाइएको किवी फल, अलैंची र चियाबाट पनि चार लाख भन्दा बढी आम्दानी हुने अपेक्षा रहेको उनले सुनाए । थोरै जमिनमा मिश्रित खेती प्रणालीमार्फत धेरै आम्दानी लिन सकिने र सिचाई व्यवस्थापन पनि सजिलै गर्न सकिने उनको भनाई छ । सुलुबुङका किसानले विगत पाँच वर्ष अगाडिदेखि व्यवसायिक रूपमा किवी खेती गर्दै आएका छन् । नयाँ किवीका विरूवा लगाउन जमिन उपलव्ध नभए पनि पूरानो चिया बगान वा अलैंची बगानमा पनि लगाउन सकिने र त्यसका बीचमा अन्य फलफूल र ग्राउण्ड एप्पल समेत फलाउन सकिने खतिवडाको अनुभव छ ।
लटरम्म फलेको किवी फलको बोटमुनि चिया र अलैंची समेत टिप्ने रहर भएका किसानलाई यहाँका किसानको परिश्रमले लोभ्याउने गरेको छ । प्राङ्गारिक खेती अवलम्बन गरेका किसानले यस्तो उत्पादनबाट बढी मूल्य पाउने गरेका छन् । अलैंची, किवी, ग्राउण्ड एप्ल र अर्थोडक्स चिया मूल्यवान नगदेबाली मानिन्छन् ।
उनको मिश्रित बाली हेर्न जिल्लाका विभिन्न गाविस तथा बाहिरी जिल्लाका कृषक समेत आउने गरेका छन् । थोरै जग्गा र कम लगानीमै धेरै आम्दानी हुने भएकाले किसानका लागि मिश्रित बाली प्रणाली प्रभावकारी हुने अगुवा कृषक तारामणि खतिवडा बताउँछन् ।
नर ब. राम्जालीलाई सम्मान
Posted on May 10, 2016 by Wakhet Diary
लामो समाय अमेरिका मा कार्यरत नर ब. राम्जालीलाई छुट्टीमा घर आएको अबसर पारी बिद्योदय निमाबि र घारसुन्नालाली गुराँश युवा कल्ब वाखेत म्याग्दीले यहि बैसाख २६ गतेको दिन सम्मान कार्यक्रम गरेको छ।
फोटो – गुन पुर्जा ( कदर पत्र प्रदान गर्दै कल्ब अध्यक्ष दल ब. पाईजा दाँया तर्फ अभिभावक संघको अध्यक्ष याम ब. बुढाथोकी र बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष रिम प्रसाद रोका)
उहाँको तर्फ बाट भएका सहयोगहरुको लिस्ट लामै छ। उहाँको समाजिक कार्य र सहयोगलाई वाखेत डायरीले यसरी रेकर्ड राखेको छ।
पुस्तकालय भ्रमण बर्ष- २०१३ पुस्तक सहयोग अभियान मा भएको सहयोग।
हेरलो मेला मा २०७० मा समुह मा ग्राण्ड स्पोन्सर (६० हजार रुपैया)
विद्यालय चलाउन ‘चिनो कोष’ स्थापना गर्दा
उहाँ को परिवार बाट सयुक्त रुपमा १ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैया बिद्योदय को स्तरउन्नती ‘चिनोकोष” लाभई सहयोग प्राप्त भएको हो।
यस्को पुर्ण लिंक यहा हेर्न सक्नु हुन्छ।
भुपु गोर्खा कम्प्युटर ल्याव भवन तथा जग्गा खरिद गर्दा बाबा भिम ब. राम्जालीको नाम बाट ५० हजार रुपैया सहयोग भएको छ।
वाखेत खेल मैदान & मञ्च स्तरउन्नती सहयोग अपडेट – ३
Latest Update as 09 May 2015
नर ब. राम्जाली (अमेरीका) बाट बास्केटबल पोस्ट खर्च प्रायोजन रु। – ७५,००० (पचहत्तर हजार)
यहाँ छुटेका सहयोग अपडेटहरु कमेन्ट मार्फत सच्चाउनु सहयोग गर्नु होला